Bit By Bit - Running fanandramana - 4.4.3 rafitra
Fanandramana refesina ny zava-nitranga. Rafitra hazavao ny antony sy ny fomba nitranga.
Ny fahatelo hevitra manan-danja noho ny hifindra any an-dafin'ny fanandramana tsotra no rafitra. Rafitra milaza amintsika ny antony na ny fomba fitsaboana iray nahatonga ny vokany. Ny dingan'ny mitady rafitra koa indraindray dia antsoina hoe mitady nitsabaka hiovaova na fanelanelanana hiovaova. Na dia fanandramana dia tsara noho ny estimating causal vokany, dia matetika no tsy natao mba hanehoana rafitra. Hafanàm-po an fanandramana taona dia afaka manampy antsika hamantatra rafitra amin'ny fomba roa: 1) dia manome fahafahana antsika mba hanangona dingana bebe kokoa tahirin-kevitra sy 2) dia manome fahafahana antsika mba hitsapana mifandraika maro fitsaboana.
Satria rafitra dia mamitaka ny hamaritana fomba ofisialy (Hedström and Ylikoski 2010) , aho handeha hanomboka amin'ny ohatra tsotra: limes sy ny hatenina (Gerber and Green 2012) . Tamin'ny taonjato faha-18 dokotera nisy tsara tarehy tsara ny heviny hoe rehefa nihinana limes tantsambo dia tsy hitany aza hatenina. Ny boka dia aretina mahatsiravina toy izany vaovao mahery vaika. Nefa, ireo dokotera dia tsy fantany ny antony nanakana ny hatenina limes. Tsy hatramin'ny 1932, efa ho 200 taona tatỳ aoriana, fa ny mpahay siansa mety reliably mampiseho fa vitaminina C no antony nanakana sokay hatenina (Carpenter 1988, p 191) . Amin'ity tranga ity, vitaminina C no rafitra alalan 'izany limes hisorohana ny hatenina (Sary 4.9). Mazava ho azy, famantarana ny rafitra no tena zava-dehibe siansa-betsaka siansa dia ny fahatakarana ny antony ny zavatra mitranga. Famantarana rafitra Tena zava-dehibe saika. Rehefa takatsika hoe nahoana ny fitsaboana miasa, dia afaka mampitombo mety fitsaboana vaovao izay miasa na dia tsara kokoa.
Figure 4.9: Limes hisorohana ny hatenina sy ny mekanisma dia Vitamin C.
Indrisy anefa, mitokantokana rafitra no tena sarotra. Tsy toy ny limes sy ny boka, amin'ny toe-javatra maro ara-tsosialy, ny fitsaboana mety miasa amin'ny alalan'ny maro mifamatotra lalana, izay mahatonga fitokana-monina ny rafitra tena sarotra. Na izany aza, eo amin'ny raharaha ara-tsosialy sy ny fenitra fampiasana angovo, ny mpikaroka no nitady ny fomba fiasa amin'ny alalan'ny fanangonana mitokantokana dingana tahirin-kevitra sy fitsaboana mifandray naka fanahy.
Ny fomba iray mba hizaha toetra azo atao rafitra dia amin'ny alalan'ny dingana fanangonana antontan-kevitra momba ny fomba fiantraikany ny fitsaboana azo atao rafitra. Ohatra, mahatsiaro fa Allcott (2011) dia nampiseho fa Home Energy Reports nahatonga ny olona mba hampidina ny fampiasana herinaratra. Kanefa, ahoana ireo tatitra ambany ny fampiasana herinaratra? Inona no rafitra? Ao amin'ny fanaraha-maso ny fianarana, Allcott and Rogers (2014) niasa tamin'ny hery orinasa izany, amin'ny alalan'ny rebate fandaharana, nahazo vaovao mikasika izay mpanjifa grady ny fitaovana ho bebe kokoa angovo mahomby lasitra. Allcott and Rogers (2014) nahita fa kely kokoa ny olona mandray ny Home Angovo Reports grady ny fitaovana. Nefa, io fahasamihafana dia tena kely fa afaka ihany kaonty for ny 2% ny fihenan'ny amin'ny fampiasana angovo ao amin'ny tsaboina tokantrano. Amin'ny teny hafa, appliance upgrades tsy ny lehibe indrindra amin'ny alalan'ny rafitra izay Home Angovo Report mihena fanjifàna herinaratra.
Ny fomba faharoa nianatra rafitra dia ny mihazakazaka fanandramana amin'ny kely samy hafa dikan 'ny fitsaboana. Ohatra, ao amin'ny fanandramana ny amin ' Schultz et al. (2007) sy ny tatỳ aoriana Energy Home Report fanandramana, ireo mpandray anjara dia nomena tamin'ny fitsaboana izay manana faritra roa lehibe 1) toro-hevitra momba ny angovo tahiry sy 2) vaovao momba ny angovo momba ny fampiasana ny namany (Sary 4.6). Noho izany, azo atao fa ny angovo famonjena toro-hevitra dia inona no nahatonga ilay fiovana, fa tsy ny mitovy taona vaovao. Mba hijery ny mety ny toro-hevitra fa mety ho irery ampy, Ferraro, Miranda, and Price (2011) niasa tamin'ny orinasa rano akaikin'ny Atlanta, GA, ka nihazakazaka ho eo amin'ny rano mifandray fikajiana ny fanandramana momba ny 100.000 tokantrano. Nisy fepetra efatra:
vondrona izay nahazo toro-hevitra amin'ny fahavaratra rano.
vondrona izay nahazo toro-hevitra amin'ny famonjena rano + ny fitondran-tena antso mba hamonjy rano.
vondrona izay nahazo toro-hevitra amin'ny famonjena rano + ny fitondran-tena antso mba hamonjy rano + vaovao mikasika ny fampiasana rano havany ny namany.
ny fanaraha-maso ny vondrona.
Ny mpikaroka nahita fa ny toro-hevitra ihany no fitsaboana tsy nisy vokany eo amin'ny fampiasana ny rano ao amin'ny fohy (herintaona), antonony (roa taona), ary fahari (telo taona) teny. Ny toro-hevitra + antso fitsaboana nahatonga mpandray anjara mba hampihenana ny fampiasana rano, raha tsy ao anatin'ny fohy ezaka. Farany, ny toro-hevitra + antso + mpiara-baovao fitsaboana nahatonga nihena ny fampiasana ao amin'ny fohy, antonony, ary mandritra ny fotoana maharitra (Sary 4.10). Ireo karazana andrana amin'ny unbundled fitsaboana dia fomba tsara vao hahalala izay ampahany amin'ny fitsaboana, na izay faritra miara--dia ireo izay mahatonga ny vokatry (Gerber and Green 2012, Sec. 10.6) . Ohatra, ny fanandramana ny Ferraro sy mpiara-miasa aminy dia mampiseho antsika fa toro-hevitra famonjena rano irery ihany no tsy ampy hihavitsy ny fampiasana rano.
Sary 4.10: Vokatra avy amin'ny Ferraro, Miranda, and Price (2011) . Fitsaboana nalefa May 21, 2007, sy ny vokatry dia norefesiny nandritra ny lohataona ny 2007, 2008, ary 2009. Ny unbundling ny fitsaboana ny mpikaroka nanantena mba hanana fahatsapana tsara kokoa ny rafitra. Ny toro-hevitra ihany ny fitsaboana tsy nisy fiantraikany indrindra ao amin'ny fohy (herintaona), antonony (roa taona), ary fahari (telo taona) teny. Ny toro-hevitra + antso fitsaboana nahatonga mpandray anjara mba hampihenana ny fampiasana rano, raha tsy ao anatin'ny fohy ezaka. Ny torohevitra + antso + mpiara-baovao fitsaboana nahatonga mpandray anjara mba hampihenana ny fampiasana ny rano ao amin'ny fohy, antonony, ary mandritra ny fotoana maharitra. Mitsangana mihidy dia tombanana matoky intervals. Jereo ny Bernedo, Ferraro, and Price (2014) ho an'ny fianarana tena fitaovana.
Ny tena tsara, ny iray dia mifindra any an-dafin'ny layering ny singa (toro-hevitra, toro-hevitra + hahaliana, toro-hevitra + antso + mpiara-baovao) ho feno factorial endrika-koa indraindray antsoina hoe \_ (2 ^ K \_) factorial famolavolana-toerana tsirairay mety mitambatra ny zavatra telo no pitsapana (Table 4.1). By mizaha toetra mety rehetra mitambatra ny singa, mpikaroka afaka tanteraka hijery ny vokatry ny singa tsirairay ao amin'ny fitokana-monina sy amin'ny mitambatra. Ohatra, ny fanandramana ny Ferraro sy ny mpiara-miasa aminy no tsy hita raha oharina irery ihany no mpiara dia efa ampy mba hitarika ny fotoana maharitra ny fiovana eo amin'ny fitondran-tena. Taloha, ireo teti-dratsy feno factorial no sarotra ny mila mihazakazaka satria maro ny mpandray anjara ary mila mpikaroka mba ho afaka mazava maso sy hanafaka maro ny fitsaboana. Nefa, ny nomerika manala taona ara-pitaovana ireo faneren'ny amin'ny toe-javatra sasany.
Table 4.1: Ohatra ny fitsaboana ao amin'ny famolavolana factorial feno amin'ny 3 singa: soso-kevitra, antso, ary ny mitovy taona vaovao. Ny tena famolavolana ny Ferraro, Miranda, and Price (2011) dia fractional factorial endrika izay ahitana telo fitsaboana: toro-hevitra; toro-hevitra + nampakatra ny raharaha; ary ny toro-hevitra + antso + mpiara vaovao (Sary 4.10).
4 mitovy taona vaovao
5 Soso-kevitra + antso
6 toro-hevitra + mpiara vaovao
7 antso + mpiara vaovao
8 toro-hevitra + antso + mpiara vaovao
Raha fintinina, rafitra-ny lalan'ny ny fitsaboana amin'ny alalan'ny izay manana fiantraikany-dia mampino zava-dehibe. Hafanàm-po an fanandramana taona dia afaka manampy ny mpikaroka hianatra momba ny rafitra amin'ny 1) dingana fanangonana tahirin-kevitra sy 2) manampy factorial feno teti-dratsy. Ny fomba fiasa ireo soso-kevitra amin'ny alalan'ny fomba mety avy eo amin'ny fitiliana mivantana amin'ny fanandramana manokana natao mba hizaha toetra rafitra (Ludwig, Kling, and Mullainathan 2011; Imai, Tingley, and Yamamoto 2013; Pirlott and MacKinnon 2016) .
Raha atambatra, ireo foto-kevitra telo-kery; heterogeneity ny fitsaboana vokatry; sy ny rafitra-hanome mahery vaika napetraka ny hevitra hitondrana fampianarana sy mandika fanandramana. Ireo foto-kevitra fanampiana mihoatra tsotra mpikaroka mifindra fanandramana momba ny zavatra "asa" ho karena fanandramana izay manana rohy mataho- tra ny teoria, izay manambara toerana sy ny antony fitsaboana miasa, ka mety mihitsy aza manampy ny mpikaroka mamaritra mahomby kokoa ny fitsaboana. Noho izany-pisainana fototra momba ny fanandramana, izao aho hiverina ho fomba ahafahanao manao ny fanandramana tena tanteraka.